Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: vahiny tsy nampoizina no mamosavy ny firenena | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: vahiny tsy nampoizina no mamosavy ny firenena
Miainga avy any ny loza aterak’ilay fanday atao hoe «chenille légionnaire». Tsy honohono ny fandravaravany ny voly toy ny katsaka izay katsakatsahany avokoa na ny raviny na ny babiny. Faritra maro eto amin’ny nosy no nielezany. Samy mitaraina avokoa ny mpamboly. Nitondra faisana sy fongana avokoa ny vokatra nantenainy. Ny anarana ahafantarana azy dia ampy ilazana fa tsy teratany io fanday io. Rariny noho izany ny fametrahana fanontaniana mikasika ny fomba nahatongavany.
Misy ireo azon’ny fakampanahy hirona any amin’ny fiahiahiana fanahy ratsy nanao ankasomparana tamin’ny fampidirana fanahiniana an’ity bibikely mitera-doza manoatra noho ny fositra aretina manimba fary iray lohasaha. Efa tena olona tsy mataho-tody no afaka mamorika vahoaka manerana firenena manontolo noho ny antony tsy fantatra. Araky ny fandinihan’ny tompon’andraikitra mikarakara ny fambolena, toy ny vitsika miomba kitay, nifikitra nanaraka entana anaty kontenera ny fomba nidirany teto amin’ny nosy. Zava-goavana tsy misy ifandraisana amin’ny fanday ny habeny aza tafiditra antsokosoko, maika fa bibikely toy itony. Misy milaza fa niampita ranomasina avy any Afrika ny lolo miteraka atody izay lasa io fanday io rehefa foy mialoha ny fiofony indray ho lolo. Nahoana ary no niandrasany ny taona 2017 vao nananika an’i Gasikara izy ? Fantatra fa mahatojo fifindran-toerana manalavitra an-jato kilometatra ny lolo iray, fa sarotra no iheverana lolo afaka hiampita ranomasina, indrindra moa fa ity lolo ity tsy manidina raha tsy amin’ny alina.
Araky ny teny midina avy amin’ny fitondrana amperin’asa tsy miandry ela ny fanapahan-kevitra amin’ny fandraisana adidy. Nandray fepetra haingana arak’izany ny minisitry Fambolena. Miainga izao dia izao ny fanaovana ady amin’io fanday io. Araky ny fiheverana dia famendrahana poizina eraky ny saha tsikaritra misy azy sy ny toerana fantatra nametrahan’ny lolo reniny atody. Tsy maintsy mitandrina ihany anefa eo am-pamonjena ny maika izay tsy afaka ialana. Izao fitrangan-javatra mandoza izao mifanindry indrindra amin’ny fampitandremana nataon’ny mpikaroka momba ny voka-dratsin’ny fampiasana mihoapampana ny poizina famonoana bibikely.
Fongana ny bibikely mandoza, tapi-taranaka miaraka amin’izany ny bibikely hafa toy ny tantely, miantraika any amin’ny vokatry ny zava-maniry toy ny hazo fihinam-boa, kere hatramin’ny voromanidina mpihaza bibikely. Atao ahoana ny fiarovana avy amin’izy ireny? Hibakabaka ny fandeha noho ny fiverenan’ny parasy lafrika, andiany ny fanidinan’ny lalitra sy ny moka, tsy resahina intsony ny hao sy haofotsy. Misy diso izany, ny fahadiovana ampy andresena an’ireto farany ireto.